Ndira 9 - Wikipedia
Ndira 9 musi we chipfumbamwe wegore pakarenda ya Gregori; Mazuva 356 asara kusvika pakupera kwegore (357 mumakore ekusvetuka).
1.1 Shure kwe ma1600
1.3 1901 - ku ikozvino
Shure kwe ma1600Edit
681 - Gumi nembiri Kanzuru yeToledo: Mambo Erwig weVisigoths anotanga dare raanoshandisa matanho akasiyana-siyana achipokana nemaJudha muSpeini
1127 - Hondo dzeJin-Rwiyo: Vanopinda nemauto eJurchen kubva kudzinza reJin vakakomba nekubvisa Bianjing (Kaifeng), guta guru reRwiyo rwedzinza reChayina, uye nechisimba Empara Qinzong weRwiyo nevamwe, vachigumisa dzinza reNorth Song.
1349 - Huwandu hwemaJudha muBhaseri (Basel), hunotendwa nevagari kuti ndiyo honzeri yeBlack Death inoenderera mberi, inounganidzwa nekupiswa.
1431 - Kutongwa kwaJoan weArc kunotanga muRouen.
1601 - 1900Edit
1760 - Ahmad Shah Durrani anokunda Marathas muHondo yeBarari Ghat.
1787 - Mufananidzo unozivikanwa munyika yose weMunazarini Mutema muFiripina wakatamiswa kubva kune yava kunzi Rizal Park kuenda kunzvimbo yazvino uno muchechi diki ye Kereke yeQuiapo. Izvi zvinorangarirwa gore negore kuburikidza neTraslación (kuendeswa kwakasimba) mumigwagwa yeManila uye inopindwa nemamiriyoni evakazvipira
1901 - ku ikozvinoEdit
1917 - Hondo Yenyika I: Hondo yeRafa inorwiwa pedyo nemuganhu we Ijipita ne Parastini.
1957 - Mutungamiriri weBhuritaniya Sinyoro Anthony Eden vanosiya chigaro zvichitevera kutadza kwavo kutora Suez Canal kubva muhutongi hweIjipita.
1960 - Mutungamiri weIjipita Gamal Abdel Nasser anovhura kuvaka paAswan Dam nekuputika matani gumi edhamu kuti aparadze matani makumi maviri egranite kumahombekombe ekumabvazuva kweNairi.
2004 - Chikepe chinoputika chakatakura vanhu vekuArubhaniya zvisiri pamutemo zviteshi pedyo nePeninzura ye Karabhuruni munzira kuenda kuBrindisi, Itari; kutarisana nemamiriro ekunze kunouraya 28. Iyi injodzi yechipiri yakaipisisa munhoroondo ye Arubhaniya.
1967 - Gary Teichmann, Gweru, Zimbabwe | Mutambi weMubatanidzwa weRagibhi
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ndira_9&oldid=90447"
Last edited on 16 Zvita 2021, at 13:37
This page was last edited on 16 Zvita 2021, at 13:37.